Lionel Messi oo ka dalbaya Barcelona inaysan la soo saxiixan Mesut Ozil – Gool FM
(Catalonia) 28 Nof 2017. Lionel Messi ayaanan dooneyn in Mesut Ozil uu ku soo biiro kooxdiisa Barcelona.
Laacibka reer Germany ayaa qandaraaskiisa ka dhici doonaa dhammaadka kal ciyaareedka wuxuuna gegada Emirates kaga tagi karaa si bilaash ah.
29-jirka ayaa diidan inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda ka dhisan woqooyiga London.
Kubbad qaabeeyaha ayaa usbuucyadii dhawaa si wayn lala xiriirinayay inuu u soo dhaqaaqo kooxaha waa wayn ee Barcelona iyo Manchester United.
Yeelkeede, sida uu sheegayo warsidaha Spain ee Diario Gol, in Messi uu u sheegay Barcelona inaysan la soo saxiixan Ozil.
Laacibka reer Argentina ayaa shaki ka qaba hab dhaqanka, daacadnimada iyo dhabar adeega xiddiga reer Germany.
Diario Gol ayaana sheeganeysa in Messi uu tababaraha Barca Ernesto Valverde iyo maamulka kooxda uu u sheegay fikradihiisa iyo aragtidiisa isla markii laacibka Arsenal lala xiriiriyay inuu u soo dhaqaaqayo Nou Camp.
Arsene Wenger ayaa bilooyinkii dhawaa si furan uga hadlayay mustaqbalka Ozil iyadoo macallinka reer Frace uu qashinka ku daray nux nuxda laacibkiisa la xiriirineysa inuu heshiis la gaaray Barcelona.
Wenger ayaa ‘Maya’ ku jawaabay mar wax laga waydiiyay haddii uu Ozil ku sii jeedo Nou Camp.
Ozil ayaa ka maqnaa dheeshii dhaweyd ay Gunners dirqiga uga adkaatay Burnley horyaalka Premier League laakiin laacibka ayaa wacdaro dhigay ciyaartii ka horreysay ay ka adkaadeen kooxda kula coltanta London ee Tottenham.
Heshiis Qarsoodi ah uu Asensio la galay Real Madrid oo farxad galinaya Chelsea…(Sidee!!?)